MACLUUMAADKA TARANKA EEYAHA CHOWPIT IYO SAWIRO - EEYAHA
Macluumaadka Taranka Eeyaha Chowpit iyo Sawiro
Chow Chow / Pit Bull Terrier Isku-dhaf ah Eeyo
'Kani waa isku darka' Pitbull / Chow Chow 'ama waxaan filayaa inaad ugu yeeri karto Pitchow. Magaciisu waa Grizzly waana 9 bilood jir. Isagu waa nin aad u eg. Wuxuu leeyahay Chow-ga carrab buluug ah dabadiisana dhabarkiisa ayaa ku duuban.
Chowpit-ka maahan eey saafi ah. Waa iskutallaab udhaxeysa Chow Chow iyo Teri Bull Terrier . Habka ugu wanaagsan ee lagu go'aamiyo dabeecadda noocyada isku dhafan ayaa ah inaad ka raadiso dhammaan noocyada iskutallaabta isla markaana aad ogaato inaad ka heli karto isku-darka mid kasta oo ka mid ah astaamaha laga helo nooc kasta. Maahan in eeyeyaashan eyda isku dhafan ee la dhalayey yihiin 50% saafi ah ilaa 50% daahir ah. Aad bay caan u tahay in kuwa wax soosaara ay tarmaan iskutallaabno jiil badan .
'Spook wuu nala joogay tan iyo markuu ahaa eey. Waa 3 jir ku jira sawirkan. Wuxuu u badan yahay bunni laakiin madow dhabarka iyo dabada ayuu ku leeyahay madowna khadka dhexe ee calooshiisa. Wuxuu jecel yahay inuu cuno dhammaan noocyada cuntada iyo jecel biyaha ! Wuxuu ku raaxeysanayaa socodka iyo ku ciyaarida agabka carruurtu ku ciyaarto, xaqiiqdii wuxuu la ciyaaraa kubbadda. Waxa uu leeyahay indho jilicsan oo dhalaalaya oo leh sanka oo madow iyo bunni. Wuxuu leeyahay jaakad jilicsan waana eey dhexdhexaad dhexdhexaad ah. Spook wuxuu jecel yahay aadanaha oo ka weyn markaa isagu wuu yahay, haddii kale wuu guuxayaa illaa la soo bandhigo mooyee. Wuxuu jecel yahay eeyaha oo dhan illaa iyo inta uu marka hore igu arko eeyga. '
Waxaan ka soo badbaadinay Rufie lacagta maxaliga ah 5 sano ka hor markaa waa qiyaastii 6 sano jir haatan. Isagu waa godka Bull / Chow Chow. Ey yar ahaan wuxuu ahaa qof firfircoon oo dhaqso badan. Wuxuu aad u jeclaa qayilaadda alwaaxa, taas oo burburisay qaar ka mid ah baararka, jaranjarooyinka, iyo miisaskeena. Waxaan ogaanay in nooca uu jecel yahay ee toy uu ahaa daanyeer cufan oo waxaan ogaanay in ilaa iyo inta aan sii jiifsaneyno, uu taa badalkeeda ku calali lahaa. Isagu hadda waa eeygii ugu macaanaa uguna dhaqan wanaagsanaa ee aan abid yeesho (qaasatan tan iyo markii uu joojiyay ilkaha oo uusan mar dambe dareemin rabitaanka ah inuu had iyo jeer wax cuno). Wuxuu dhif yahay inuu ciyo oo uu jeclaado dadka - gaar ahaan carruurta. Inaadeerkay xitaa isaga ayaa dusha ka saaraya. Wuxuu jecel yahay inuu ku dhex ordo daaraddeenna oo uu la ciyaaro eyga cusub ee Penny. Markay baraf dhacdo wuxuu ku tuurayaa baraf daboolka afkiisa wuxuuna isku dayay inuu qabto, taas oo ah mid aad u qosol badan in la daawado Wuu ku fiican yahay qoyskeyga maxaa yeelay wuxuu umuuqdaa ilaaliye, laakiin runtii, wuu iska leefleefi lahaa wax kasta ku soo xadgudbay oo rog rogo si aad u noqoto xayawaan. ''
Rufie The Pull Bull / Chow Chow isku darka 6 sano jir
Grizzly the Chow Chow / Pit Bull mix ey ey 9 bilood jir
Saddie the Pit Bull / Chow Chow iskudhaaf ey eyda oo jira 11 bilood jir— 'Saddie wuxuu na siinayey sida ey 4-bilood jir ah. Aad bay u baqday. Waxay ku qaadatay inay 2 diirimaad ku qaadato haddana waxay ii dooratay inaan noqdo qof bini aadam ah aadna way u ilaalisaa qoyska oo dhan. Saaxiibkeeda ugu fiican waa Chief, buluug Pit Bull. '
garaac adag ee madaxa eeyga
chihuahua mini pinscher mix dhallaanka
eygu wuxuu ku dhalaa carrab guduudan